Khaliifka Murashaxa Golaha Wakiiladda Ee 2021-ka Intaynu Ka Aragnay | Gabiley News Online
March 5, 2021 - Written by admin
5-tii sanno ee uu Wasiirka aha Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ahayd xilligii Xukuumaddii Axmed Siilaanyo waxay Somaliland maamulka gaadhsiisay badi degaanada Gobolka Sool oo ay ku jirto Degmada Taleex oo markii hore aan ku jirin gacanta Somaliland.
Wuxuu xanbaaray isagoo kalmaynaaya Madaxweynihiisi fariinti ahayd in ay shacabka Sool ku qancaan Ciidamadda iyo maamulka Somaliland una arkaan dantooda, taas oo meesha ka saartay rabshadihii iyo Dilalkii ka dhici jiray degaanada Gobolka.
Waxa barbar socday muddadaas wax qabadka kaabayasha Bulshada oo uu hormuud hirgaliye ka aha sida. Aasaaska Jaamacadda Nugaal, Cisbitaalka Laascanood oo laga qorsheeyay sanduuqa SSDF, wadooyinka magaalada, iyo mashaaric tiro badan oo fulay xil haynti Cabdirisaaq Khaliif.
Dabcan Madaxweynihii igmaday iyo isagoo aha siyaasiga Gobolka u qaabilsan Xukuumadda ayaa gulahaas wada laha .
Cabdirisaaq Khaliif Axmed waa siyaasiga kaliya ee Garaadkiisi Garaad Garaad Jaamac Garaad Ismaciil ku qanciyay inay Somaliland wax la qabsadaan sidaana uu ku yimi Garaadku Dalkiisi ilaa haddana Garaadka qudha ee Garaadadi Beesha Dhulbahante ka jooga Somaliland waa Garaad Jaamac Garaad Ismaciil waana tijaaboyinka hoggaamineed ee u qoray Siyaasi Cabdirisaaq Khaliif.
Markii uu noqday Hoggaanka Xisbiga Waddani (Guddoomiye ku-xigeenka koobaad) Tartankii doorashada Madaxtooyada Cabdirisaaq Khaliif wuxuu aha Jookarkii ka hirgaliyay in markii koobaad Mucaarid iyo Muxaafid loogu tartamo doorasho qof iyo cod ah Gobolka Sool.
In kasta oo Xisbigiisi aanu ku soo bixin doorashadii guud hadana Waddani wuxuu Sool ka noqday Xisbiga koobaad iyadoo ay dhanka kale ka soo jeedeen dhammaan masuuliyiinti degaankiisa sida Wasiirkii arrimaha gudaha iyo Guddoomiyihii Golaha Wakiilada, Wasiiradii kale, Xildhibaano + Xukuumadi oo ciidan iyo cududba isugu gaysay codka Gobolka Sool. Intaas oo dhan ayuu Mr. Cabdirisaaq Khaliif kaligii u jilib dhigay kana guulaystay.